Nwee ihe oriri na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ na-egosipụta ahụekere aekere pụrụ iche, tomato ọhụrụ na mado tomato.
O doro anya ịhụ ihe kpatara nri ndị mba Gambia!
Mụta ime Domoda:
Ndị na-eme akwụkwọ:
1 lb anụ ehi ma ọ bụ 1 lb anụ ọkụkọ, bee n'ime ½ anụ ọhịa chunks (ma ọ bụ jiri ọkpụkpụ na-anụ ọkụkọ ma gbanye ha na ihendori; ozugbo esi ya hapụ mpekere niile ma ọ bụ wepụ anụ ahụ n'ọkpụkpụ ma tinye ya na stew .)
1 nnukwu yabasị, emere
2 mmanụ oliv mmanụ pasent
3 Romatị Rom, gbanyụrụ
½ nwere ike (3 oz) mado tomato
Cup Natural, unsweetened ahuekere bọta
4 Maggi ma ọ bụ Knorr tomato bouillon cubes
Mmiri iko nke 3
Scotch bonnet chilies, diced, dịka nhọrọ ọkụ si dị
4 iko ugu ma ọ bụ poteto ụtọ, diced
Kpoo mmanu n'ime nnukwu ite Dutch. Ghaa eyịm ruo mgbe ọlaedo. Tinye anụ ehi na galik ma gaa n'ihu na-amịpụta ruo mgbe anụ ehi ahụ agaghịzi acha pink. Tinye tomato ma sie ya maka nkeji 3. Gbakwunye mado tomato, chilies, ahụekere bọta ma bido ijikọta. Tinye mmiri na bouillon cubes. Weta na obụpde, belata okpomọkụ, kpuchie ya, ma gbanye ya ruo minit 15, na-akpali akpali oge ụfọdụ. Tinye skwọsh, kpuchie, ma gaa n'ihu na-esi nri maka minit 35-40 ma ọ bụ ruo mgbe ugu dị nro, na-akpali oge ụfọdụ. Oge na nnu na ose.
Jiri osikapa na-efe ọkụ. Stew a na-atọkwa ụtọ n’echi ya.
Na-egwu Gourmet, Machị 2013
"Nke a vegan ero Bourguignon bụ heady melange nke flavors na textures na a ezigbo, velvety ihendori" Na-eje ozi ove ...
"Sole meunière na-egosipụta ekpomeekpo dị mfe nke azụ ọhụrụ, bọta, lemon na pasili" Ezigbo bekee Dover naanị ...
"Aha ya maka mpaghara dị na Normandy mara maka apụl ya (na Calvados), akwụkwọ nri ọdịnala a na - agwakọta ma ọgaranya, ...
Laghachi na Ezi ntụziaka